သာလွန်ဇောင်းထက်| November 27, 2012 | Hits:107
11 | | ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Ngal Hriang November 27, 2012 - 12:29 pm	Government needs to relinquish all businesses to private companies. As long as government is controlling or competing with private companies, capitalism will not flourish and democracy will not blossom in the Union of Burma.
Reply	MM November 28, 2012 - 2:51 am	စစ်တပ်က မြတ်နေရင် မလွှဲပါဘူး။ ရှုံးနေလို့ လွှဲတာပါ။MEC က ရှုံးနေတဲ့စက်ရုံတွေကို ၀န်ကြီးဌာနကို လွှဲပေးတာကို မစစ်မဆေးပဲ လွှတ်တော်က လက်ခံရတာလား။ဒီလိုဆို စစ်တပ်က (ဗိုလ်)သိန်းစိန်ရဲ့ တိုက်ပုံအစိုးရကို အမိန့်ပေးနိုင်နေတယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ။ ဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေကို တိုင်းပြည်အတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဘက်မှာ မသုံးသင့်ဘူးလား။